Fomba skandinavianina - pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Keyword: Fomba skandinavianina
Hevitra sy fanomezana mahafinaritra ho an'ny ankizy
Raha te hampifaly ny zanakao ianao dia tsy voatery hampiasa ny fironana farany farany. Tsy voatery ho kilalao enta-mavesatra foana ny teknolojia. Izay rehetra manaitra ny sain'ny zanakao dia mahafinaritra.
Zavatra tena mahafinaritra ho an'ny zanakao
Araka ny hitanao amin'ny fifantohanay amin'ireo pejy fandokoana, mpankafy fandaharana fialamboly mahazatra ho an'ny ankizy izahay. Ary ny Internet dia mety amin'ny fizahana hevitra momba ny lalao mahafinaritra.
Fanomezana sy hevitra mahafinaritra ho an'ny zanakao - © NDABCREATIVITY / Adobe Stock
Izay manana fahalemena amin'ny fomba Skandinavianina mahazatra izay ankafizinay dia ho hitany ihany koa. Ary koa momba ny fanaka ao amin'ny efitrano na kilalao ho an'ny ankizy, ao anatin'izany ny saribakoly.
Amin'ny farany, miankina amin'ny fitaovana: ny zavatra tsapany sy ny nanaovana azy ireo hifanaraka amin'ny tanan'ny ankizy kely. Hahita lahatsoratra avo lenta ao amin'ny fivarotana an-tserasera Fabelab ianao. Na inona na inona tadiavinao dia manome entana ho an'ny efitranon'ny ankizy izay misy fiheverana amin'ny antsipiriany na kilalao izay hampamirapiratra ny zanakao amin'ny endrika amam-pitiavan-dry zareo.
Ny vodin-tsaribakoly vita amin'ny hazo, ohatra, dia toa manintona tokoa. Miaraka amin'ity modely tsara tarehy ity, ny saribakoly dia azo entina am-pitiavana mandehandeha. Fa ny basinet dia toa tsara tarehy toy ny haingon-trano koa ary mitondra hafanana sy hatsarana amin'ny efitranon'ny ankizy rehetra.
"Hevitra sy fanomezana mahafinaritra ho an'ny ankizy" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 20. Oktobra 2020 20. Oktobra 2020 Sokajy fampianarana, tokantranoKeywords Angano, Gifts, ankizy, nursery, saribakoly, skandinavianina, Fomba skandinavianina, milalaoLeave a Comment amin'ny Hevitra tsara sy fanomezana ho an'ny ankizy